सहायता सम्मेलनमा जापानले थप सहयोग रकम घोषणा गर्ने
प्रकाशित मिति: 2015/06/12
भूकम्पपश्चात् ठूलो सहयोग रकम घोषणा गरेको जापानले पुनर्निर्माणका सहायता जुटाउन आयोजना गर्नलागिएको सम्मेलनमा समेत थप सहयोग रकम घोषणा गर्ने भएको छ । आगामी असार १० मा काठमाडौंंमा आयोजना हुने नेपाल सहायता सम्मेलनमा जापानले थप रकम सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावाले बताएका छन् । सहायता सम्मेलनलाई सफल बनाउने तयारीको क्रममा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले सहायता सम्मेलनको तयारी र नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमबारे राजदूत सासासीलाई मोटामोटी जानकारी गराएका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (पीडीएनए) अर्को हप्तासम्ममा तयार हुने जानकारी दिँदै उनले शुभेच्छुक मित्रराष्ट्रका हैसियतले जापान सरकारबाट नेपालले ठूलो अपेक्षा राखेको बताएका थिए । जापानले नेपालको विकासमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यो विपत्को अवस्थामा अझ ठूलो सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । भेटमा जापानी राजदूत ओगावाले आगामी असार १० गते हुने सम्मेलनकै क्रममा जापानले सहयोगको घोषणा गर्ने जानकारी दिएका थिए । उनले आफूले सकेसम्म बढी सहायता उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताएका थिए ।
यसैबीच दातासम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा सम्मेलनको तयारी तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । सम्मेलनका लागि हालसम्म करिब ६५ दातृमुलुक तथा निकायहरुमा निम्तो पठाइसकिएको सरकारले जनाएको छ । पराम्परागत दातामुलुक तथा निकायहरुका अतिरिक्त उद्धार तथा राहत कार्यमा संलग्न नयाँ दाताहरुलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनको संयोजक रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले भारत, चीनका राजदूत लगायत सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने अधिकांश मुलुकका राजदूतहरुसमक्ष भेटघाट तथा छलफल गरिसकेका छन् । यसबीच नेपालमा रहेका स्थानीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु तथा द्विपक्षीय दातामुलुकहरुसमक्ष दुईपटक विशेष बैठकहरु समेत भइसकेको र उनीहरुसँग थुप्रै अनौपचारिक बैठकहरु समेत सम्पन्न भइसकेको सरकारले जनाएको छ । हरेक बैठकहरुमा अर्थमन्त्री तथा सम्मेलन संयोजक डा. महतले बहुपक्षीय दातृनिकाय तथा दाता मुलुकहरुबाट उच्च नेतृत्वको सहभागिताका लागि आग्रह गरेको महतले जानकारी दिए ।